Izindatshana zika-Alexandra Isenegger Martech Zone |
Imibhalo nge U-Alexandra Isenegger
U-Alexandra uyi-CEO ye Xhumanisa. Ukuqala kudinga imibhalo eqinile yezomthetho futhi abameli babiza amanani ahlekisayo. I-Linkilaw izinikele ekumiseni ukungasebenzi kahle, yenza lula imisebenzi yezomthetho futhi isize umsebenzi wezomthetho ukuthi ufinyeleleke. Ngobuchwepheshe bethu, izixazululo ezisendlini nemakethe yezomthetho, sinikezela ngeziqalo zangaphambi kochungechunge B ngosizo olukhulu lwezomthetho.
Ngabe Uyayidinga Imigomo Nemibandela, Izinqubomgomo Zobumfihlo Nezamakhukhi?
ISonto, Ephreli 30, 2017 UMsombuluko, May 1, 2017 U-Alexandra Isenegger
Ukuxhumana nokuhwebelana kuhlale kuhambisana. Lokhu kuyiqiniso kakhulu manje kunanini ngaphambili, ngokutholakala kwethu okwandayo kumadivayisi aku-inthanethi, kungaba kumakhompyutha ethu, kumathebulethi noma kumaselula. Ngenxa yalokhu kufinyelela ngokushesha olwazini olusha, iwebhusayithi yenkampani isibe yithuluzi eliyinhloko lamabhizinisi ukuletha imikhiqizo yawo, izinsizakalo namasiko emakethe ebanzi. Amawebhusayithi anika amandla amabhizinisi ngokuwavumela ukuthi afinyelele futhi afinyelelwe ngawo